Psalmen 6 HTB - Nnwom 6 AKCB
1Awurade nka mʼanim wɔ wʼabufuw mu,
2Hu me mmɔbɔ, Awurade, efisɛ meyɛ mmrɛw;
4San bra, Awurade, na begye me nkwa;
5Obi a wawu no renkae wo da,
6Apinisi ama mayɛ mmerɛw.
7Awerɛhow ama mʼani so ayɛ me kusuu.
8Mo nnebɔneyɛfo, montwe mo ho mfi me ho!
9Awurade ate me mmɔborɔsu;
10Mʼatamfo nyinaa anim begu ase
AKCB : Nnwom 6